त्यत्रो जुलुस ल्याउन हामीसित पैसा छैन : देउवा – रुपान्तर
मुख्य पृष्ठसमाचारत्यत्रो जुलुस ल्याउन हामीसित पैसा छैन : देउवा
त्यत्रो जुलुस ल्याउन हामीसित पैसा छैन : देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको विषयमा अदालतले गर्ने फैसला कुर्न आग्रह गरेका छन्।
जुलुसकै आधारमा फैसला गर्ने हो भने न्यायालय किन चाहियो ? भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्।
‘सडकमा जुलुस ल्याएर न्याय पाइँदैन, हामीसित पैसा पनि छैन। ठाउँ/ठाउँमा जुलुस पुर्‍याउन पनि सक्दैन। जुलुसकै आधारमा फैसला गर्ने हो भने न्यायालय किन चाहियो ? जुलुसमा कति मान्छे आए भनेर हुन्छ ? त्यत्रो जुलुस ल्याउन हामीसित पैसा पनि छैन,’ देउवाले भने।
नेपाल राष्ट्रिय मगर संघको पोखरामा भएको गण्डकी प्रदेश सम्मेलनमा बोल्दै देउवाले कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य आन्दोलनमा बोलाए पनि नआउने दाबी गरे। ‘हाम्रा क्रियाशील आउँदा पनि आउँदैनन्, क्रियाशील दिने बेला मारामार हुन्छ,’ उनले भने, ‘क्रियाशील आउँदा पनि आउँदैनन्। चुनावमा क्रियाशील सबैलाई चाहिन्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले हठात् संसद विघटन गरेर ठूलो ध्रुवीकरण गरेको देउवाको दाबी छ। ‘कोही यो ठिक हो भन्छ, कोही ठिक होइन भन्छ,’ उनले भने, ‘चार वटा कुरा छ, संसद विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक र संसद पुनर्स्थापना कि चुनाव।’